लकडाउनभर कता हराए प्रचण्ड ? - || वर्णन मिडिया - संवाहक सूचना तथा समाचारको ||
लकडाउनभर कता हराए प्रचण्ड ?
२०७७ जेष्ठ २९, बिहीबार ०८:३६:००
काठमाडाैँ-नागरिकको यथार्थ अवस्था बुझेका प्रचण्डले कतै १३ वर्षको काठमाडौं बसाइका क्रममा बिर्सन त बिर्सेनन भन्ने प्रश्न सर्वत्र उब्जिएको छ
काठमाडौं । गत चैत ११ गतेबाट आजसम्मको लकडाउनमा सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड नेपालमै छन वा विदेशमा थिए, सञ्चै छन् वा विरामी थिए आम नागरिकले अत्तोपत्तो पाउन सकेनन् ।
करिब तीन महिनाको यो अवधिमा उनी कतै नागरिकले कस्तो समस्या झेलेका छन् भनेर बुझ्न निस्केनन् ।
विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) नेपालमा पनि प्रवेश गरेपछि प्रभावलाई नियन्त्रणमा राख्न राज्यले लामो समय गरेको लकडाउनमा गरिखाने नागरिकले रोग र भोकको समस्या व्यापकै झेले ।
कोरोनाबाट अहिलेसम्म राज्यले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार १५ जनाको मृत्यु भएको छ । तर, भोकबाट त्यसको चौगुना बढि नागरिकले ज्यान गुमाए ।
कोही आफू र परिवारका लागि हात मुख जोर्ने व्यवस्था गर्न नसकेपछि आत्महत्या गर्न बाध्य भए । आत्महत्या गर्नेको संख्या सय कटेको तथ्यांक सरकारी निकायको छ । यसमा राज्यले कुनै ध्यान दिएन ।
न त सत्तारुढ दलले नै वास्ता गर्‍यो । सत्ताको नेतृत्व गरेको पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड जनताको यो दुःखको बेला सारथी बन्नु पर्नेमा लकडाउनको अवधिसम्म गुमनाम भए ।
लकडाउनले जनतालाई कस्तो असर पारेको छ भनेर कोरोनाको उत्पत्ति भएको चीनका राष्ट्रपति सि जीन पिङ कोरोनाको उदगम थलो वुहानमा पटक पटक पुगे ।
आफै प्रभावितसँग भेटे र समाधानका लागि आइडिया बनाउँदै कार्यान्वयन गरे । फलस्वरुप अहिले चीनको कोरोना उन्मुलन भयो । कोरोनाबाट सबैभन्दा बढि प्रधावित भएको अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, पछिल्ला दिनमा धेरै प्रभावित भएको भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मुलुकका कुना कुनामा पुगेका छन् ।
तर, नेपालका न सत्तारुढ दलका नेताहरु नागरिकसम्म पुगेका छन्, न त प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति नै ।
सरकारले काम नगरेपनि सत्तारुढ दलका अध्यक्षको हैसियतमा र दश वर्ष जनयुद्ध गर्दा जनताको समिपमा रहेर काम गरेकाले जनताका समस्या के हुन र कसरी यती लामो समय गुजारे भन्ने ज्ञान भएका प्रचण्ड गाउँ गाउँमा पुग्नु पर्नेमा आफू निर्वाचन लडेको चितवनसम्म पनि पुग्न आवस्यक ठानेनन् । गुमनामजस्तै बसेर लगभग तीन महिनाको समय विताए ।
नेपालका करिब आधा जनता गरिबीको रेखामुनी छन् । उनीहरुलाई दिनभर काम नगरे बिहान साझ हातमुख जोर्न गाह्रो हुन्छ । त्यो जनयुद्धका क्रममा गाउँगाउँमा पुग्दा प्रचण्डले राम्रोसँग बुझेका छन् ।
तर, यती सामो समय लकडाउन भएर घरभित्रै थुनिनु पर्दा ती नागरिकले कसरी हातमुख जोरे होलान भन्ने प्रचण्डले चिन्ता लिएर कतै पनि नागरिकको अवस्था के छ भनेर बुझ्न पुगेनन् ।
यसले कतै प्रचण्ड १३ वर्ष मुलधारको राजनीतिमा आएर नागरिक र मुलुकको अवस्था के छ भन्ने बिर्सेका त होइनन्, भन्ने प्रश्न आमनागरिकमा खडा भएको छ । जुन स्वभाविक पनि हो ।
आम नागरिक र मुलुकको भन्दा आफ्नो ज्यानको माया मान्ने व्यक्ति नेता हुन सक्दैनन् । राजनेता भनेका ति हुन, आफ्नो जीवनको प्रवाह नगरी राष्ट्र र मुलुकका लागि काम गरुन । तर, प्रचण्ड त्यस्ता नेता बन्छन कि भनेको बन्न सकेनन् ।
प्रचण्ड मात्रै होइन, न त सत्तारुढ दलका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली काठमाडौं छोडेर मुलुकको अन्य कुनै भूभागमा पुगे । न प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नै ।
यसले नेताहरु मुलुकमा समस्या आयो भने राष्ट्र र नागरिक बचाउनतर्फ भन्दा आफ्नो ज्यान र परिवार बचाउन तर्फ ध्यान दिने रहेछन् भन्ने पुष्टि भएको छ ।